परीक्षार्थीदेखि प्रमाणपत्रसम्म नक्कलीः फार्मेसी पासै नगरेकालाई काउन्सिलको लाइसेन्स :: नारायण अधिकारी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
परीक्षार्थीदेखि प्रमाणपत्रसम्म नक्कलीः फार्मेसी पासै नगरेकालाई काउन्सिलको लाइसेन्स
तीन वर्षदेखि यसरी हुँदै आएको थियो नक्कलीको धन्दा
नारायण अधिकारी बुधबार, भदौ २३, २०७८, १७:४६:००
काठमाडौं– नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायकलाई दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउँछ। फार्मेसी विषयमा स्नातक गरेका वा सो सरहको योग्यता प्राप्त भएका व्यक्तिले फर्मासिष्ट र फार्मेसी विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र वा सो सरहको योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिले फार्मेसी सहायकको लाइसेन्स पाउँछन्।
लाइसेन्स लिनका लागि विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा काउन्सिलको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त उनीहरुले शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषय पढेर पास गरेको हुनुपर्छ।
तर, विगत तीन वर्षदेखि फार्मेसी विषयमा स्नातक वा प्रमाणपत्र तह नै नपढेकाले पनि काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइरहेको तथ्या फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले बागलुङका एक युवालाई मंगलबार पक्राउ गरेसँगै यो रहस्य बाहिर आएको हो।
परिसर ललितपुरले बागलुङको वडिगार्ड गाउँपालिका–९ का ३२ वर्षीय युद्धबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो। केसीलाई परिसर ललितपुरको विशेष टोलीले मंगलबार कुपण्डोलस्थित युएन पार्कबाट पक्राउ गरेको थियो।
परिसर ललितपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रज्वल महर्जनका अनुसार पक्राउ परेका केसीले फार्मेसीमा डिप्लोमा गरकोदेखि नेपाल फार्मेसी काउन्सिलबाट दिइने लाइसेन्ससम्म नक्कली बनाउँदै बेच्ने गरेको पाइएको छ।
प्रवेश पत्रको फोटो उप्काएर अर्कैले दिन्थे लाइसेन्स परीक्षा
उनले नेपाल र भारतका विभिन्न कलेजबाट फार्मेसी उत्तीर्ण गरेको भन्दै नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने र त्यही आधारमा नेपाल फार्मेसी काउन्सिलबाट दिइने लाइसेन्ससमेत नक्कली निकाल्ने (नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर) गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
फार्मेसी काउन्सिलबाट लाइसेन्सका लागि लिइने परीक्षाका लागि केसीले यसरी बनाएका नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने गरेका थिए। त्यसपछि परीक्षाका लागि काउन्सिलले प्रवेशपत्र उपलब्ध गराएपछि प्रवेशपत्रको फोटा उप्काएर परीक्षा पास गर्न सक्ने व्यक्तिको फोटा टाँस गरी परीक्षा दिन लगाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नक्कली कागजात एक व्यक्तिको पेश गर्ने र प्रवेशपत्रको फोटो उप्काएर अर्को व्यक्तिको टाँस गरी परीक्षा दिन लगाएर केसीले लाइसेन्स समेत निकालेर बेच्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसरी फार्मेसी पासै गर्न नसकेका व्यक्तिको फार्मेसी काउन्सिलबाट लाइसेन्स निकालिएर केसीले पैसा असुल्दै आएको पाइएको छ। फार्मेसी पासै नगरेका व्यक्तिले अवैध तरिकाबाट लाइसेन्स लिएर औषधि पसल सञ्चालनसम्म गर्ने गरेको रहस्य केसी पक्राउ परेसँगै खुलेको छ।
फार्मेसी पास नै नगरेका व्यक्तिले औषध पसल सञ्चालन गरी बेच्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलवाड भएको हुनसक्ने भन्दै परिसर ललितपुरले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
एक जना फरार
यसरी डिप्लोमा इन फार्मेसीको नक्कली सर्टिफिकेट बनाउनेदेखि, फार्मेसी काउन्सिलबाट दिइने लाइसेन्ससम्मको नक्कली डकुमेन्ट बनाउने गिरोहमा केसीसँगै अर्का एक व्यक्ति पनि रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
उनी भने अहिलेसम्म फरार छन्। ललितपुर प्रहरीअनुसार मुख्य गिरोह केसी पक्राउ परेसँगै उनी फरार भएका छन्। उनको खोजी जारी रहेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ।
फरार रहेका ती व्यक्तिले केसीलाई सहयोगीको काम गर्दै आएका थिए। यस्ता नक्कली कागजात बनाउने व्यक्तिलाई उनले केसीको सम्पर्कमा पुर्‍याउनेदेखि कागजात बनाउने काममा सहयोगी भूमिका निभाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
३ लाखमा फोर्मेसीको प्रमाणपत्र
नेपाल तथा भारतका विभिन्न कलेजहरुबाट डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र बनाउँदै आएको यो गिरोहले एक वटा डकुमेन्ट बनाएको तीन लाख रुपैयाँ लिँदै आएको पाइएको छ।
प्रहरीसँगको बयानको क्रममा पक्राउ परेका केसीले उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार केसीले बार्गेनिङ गरेर १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म लिएर यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको पाइएको छ।
कतिपय प्रमाणपत्र बनाउन उनी भारतसम्म जाने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
लाइसेन्सदेखि मार्कसिटसम्म बरामद
पक्राउ परेका केसीबाट लाइसेन्सदेखि मार्कसिटसम्मका नक्कली कागजातको डिजिटल कपी नै बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली लाइसेन्स, नक्कली प्रवेशपत्र, फार्मेसी पास परेको नक्कली मार्कसिटसम्मका कागजात बरामद भएका छन्।
नेपालकै कजेल, सिटिइभिटीदेखि भारतीय कलेजबाट उपलब्ध भएका भनिएका नक्कली कागजात बरामद भएका छन्। उसको वैधानिकता जाँचका लागि सम्बन्धीत कलेज, तथा सिटिभिटीमामा पठाउने तयारी भएको ललितपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
उनको साथबाट बरामद भएका मोबाइलमा नक्कली डकुमेन्टका डिजिटल कपी नै बरामद भएको छ। यी कागजात केसीले कहाँ डिजाइन गरे? कहाँ प्रिन्ट गर्थे भन्ने विषय भने खुलिसकेको छैन।
काठमाडौंमा पक्राउ परेपछि झापामा उजुरी
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाबाट केसी पक्राउ परेसँगै उनीविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा उजुरी समेत परेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो। आफूलाई डाक्टर बताउने एक व्यक्तिले केसीबाट ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
रकम लगेको र त्यसपछि सम्पर्कबिहिन भएर ठगी गरेको बताइएको छ। तर ठगिएर पीडित भएको भनिएका व्यक्तिको कहानी भने अर्कै रहेको प्रहरीले स्रोतले जानकारी दियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार केसीले ती व्यक्तिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)बाट उपलब्ध हुने डाक्टरको लाइसेन्स समेत उपलब्ध गराइदिने भन्दै प्रलोभनमा देखाएका थिए।
एमबिबिएस पास गरे पनि काउन्सिलले लिने परीक्षा पास नहुँदासम्म डाक्टरको काम गर्न मिल्दैन। जसकारण ती डाक्टरले केसीलाई लाइसेन्सको लोभमा केही रकम पठाएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो।
मानव हड्डी बोकेर हिँड्नेलाई के हुन्छ कारबाही? पक्राउ परेका एमबीबीएस विद्यार्थीबारे के भन्छ प्रहरी?
लागुऔषध बेच्ने सुराक पाएपछि दुई प्रहरीकै योजनामा यसरी लुटियो फार्मेसी पसल
मणिपाल किन्ने साइत हेर्न पशुपति पुगेका डाक्टर यसरी ठगिए